Global Voices teny Malagasy » Hetsika Nandritra ny “Diabe Maitso” tao Malezia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Novambra 2012 14:35 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Malezia, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Tontolo_iainana
Olona 70 no nandray anjara tamin'ny fiandohan'ny ‘Diabe Maitso’  tao Malezia tamin'ny 13 Novambra tao Kuantan. Taorian'ny diabe 13 andro sy 300 kilometatra nanavatsava ny firenena, nifarana tao an-drenivohitry ny firenena ny diabe izay olona maherin'ny 15.000 no nandray anjara sy nanohana tamin'izany. Ny vondrona Himpunan Hijau  no nikarakara ny ‘diabe lavitr'ezaka’ ho fanoherana ny fananganana orinasa mpitrandraka Lynas ao Gebeng, Pahang.
Ity orinasa ity no fantatra fa orinasa fanadiovana vovo-tany tsy fahita firy goavana indrindra manerantany. Saingy efa ela no nanohitra  ny tetikasa ny mponina sy ny manam-pahaizana momba ny tontolo iainana noho ny fiantraikany ratsy eo amin'ny fahasalamana, ny fandriampahalemana sy ny tontolo iainan'ny faritra. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, nolavin'ny Fitsarana Ambony ao Malezia ny fitakiana hampitsahatra ny fananganana ilay orinasa izay nahatonga ireo vondrona sy olom-pirenena isan-karazany hikarakara ny “Diabe Maitso”.
Anisan'ny ampahany ao anaty drafitra ny fampahafantarana  amin'ny Antenimiera sy ny Praiministra mikasika ny fitakian'ny vondrona rehefa tonga ao Kuala Lumpur ireo delegasiona. Saingy noraràn'ny  polisy tsy hanakaiky ny tranon'ny governemanta ireo mpanao diabe. Niparitaka milamina avy eo ireo vahoaka tamin'ny Alatsinainy maraina.
Nandefa vaovao farany  momba ny diabe nandritra ny herinandro ny ekipa Malaysikini:
4:53hariva- Dataran Merdeka – nitombo  maherin'ny 15.000 ankehitriny ny isan'ireo vahoaka ary mivondrona eo akaikin'ny tendro avaratra indrindra ao Dataran Merdeka izy ireo.
Tan Kai Swee nanatri-maso  ny fanohanana tampotampoka ireo mpanao diabe avy amin'ireo olo-tsotra Maleziana:
Noraisin'ireo  tanàna kely sy tanàn-dehibe nenti-nanavatsava ny lalana 300 km ny Diabe Maitso. Nandray anjara tamin'ny diabe ihany koa ireo Maleziana avy amin'ny faritra maro hafa ao amin'ny firenena. Maro ireo tonga nanome fanohanana ara-bola sy ara-pitaovana ho an'ireo mpandray anjara.
Fandraisana miezinezina no niarahabana  ireo mpitarika ny hetsika tao Dataran Merdeka:
Ity ambany ity ny lahatsary  ahitana ny fijoroana vavolombelona avy amin'ireo mpandray anjara sasany tamin'ny diabe:
Tamin'ny alalan'ny tenifototra hoe #greenwalk (diabemaitso)  sy #himpunanhijau , naneho hevitra momba ny diabe Maitso ny mpiserasera Maleziana:
@szeming87  Nanome tsiny ny #Greenwalk ny olona noho ny fitohanan'ny fiara naterany androany maraina. Aoka kosa e, ny haterena ataon'ny governemanta no mampihitsoka ny kianjan'i merdeka, fa tsy ny vahoaka!
@danleemz  Misy olona mahita vaovao momba ny #greenwalk #himpunanhijau amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fahitalavitra ve izao? Tsy mahita mihitsy aho na iray aza. Angamba satria nilamina ilay izy dia tsy notaterin'izy ireo?
@sicfallacy  Raha milaza ianao fa mahasolotena ny maro ny isa namonjy ny #GreenWalk, matahotra aho fa mety mpanakanto Kpop ny ho Praiminisitra antsika amin'ny hoavy.
@seademon  Fiaraha-miasa adalan”ny #GreenWalk mampiasa finday sy solosaina vita amin'ny vy vovo-tany tsy fahita firy
@j_rubis  Nahafinaritra ny “fihaonan-dalana-fiviliana” tamin'ny #GreenWalk. Mahafinaritra ny mahita ireo fianakaviana marobe. Faly aho fa afaka nandray anjara. Nahavita nahatratra azy ireo tao Taman Melewar ihany koa tamin'ny alina.
@VersedAnggerik  Tsarovy i Mahatma Ghandi sy ny Diaben'ny Sirany? Tena tahaka izany mihitsy ny #GreenWalk. Manao hetsi-panoherana ny tsy rariny amin'ny tontolo iainana izahay.
@JustineMeiErn  Manaja an-dry zalahy #GreenWalk tanteraka tamin'ny nahavitany dia an-tongotra mihoatra ny herinandro. Eny na zaza na zoliolona. Nampandroso tsara azy ireo tamin'ny efatra folakandro tao Dataran Merdeka!
@anonVG  Satria namonjy sy nanohana ny #HimpunanHijau ny sasany tamin'ireo mpanohitra mpanao politika, ka mahatonga ny anton'ny hetsika tsy azo ekena izany?
@edmundbon  Nitondratena tsara ny polisy androany. Tsy nisy polisy nanara-maso ny fitohanan'ny fiara (izay tokony nataony) saingy tsaratsara kokoa nanakana ny mpandeha an-tongotra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/11/28/41838/
 ‘Diabe Maitso’: https://globalvoicesonline.org/2012/11/19/300-km-long-march-against-rare-earths-refinery-in-malaysia/
 Himpunan Hijau: https://www.facebook.com/pages/Himpunan-Hijau-20-Langkah-Lestari/156138757834195
 vaovao farany: http://www.malaysiakini.com/news/215072
 #greenwalk (diabemaitso): https://twitter.com/search?q=%23greenwalk&src=typd